AHOANA NO FANAOVANA FIKAROHANA AO AMIN'NY EXCEL - EXCEL - 2019
Karohy ao amin'ny Microsoft Excel
Ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny fampahalalam-baovao manokana dia manentana mpampiasa marobe amin'ny rafitra fiasan'ny fianakaviana Windows. Miaraka amin'ny famoahana ny andiany faha-10 amin'ny OS, izay niparitaka tsy amin'ny solosaina sy solosaina fotsiny, fa koa amin'ny fitaovana finday, dia nanjary niharatsy kokoa ny olana momba ny fanakanana rindrambaiko rindrambaiko izay manazava ny fanaraha-maso mazava sy miafina. Soa ihany, misy fitaovana manokana izay ahafahanao manafika spyware amin'ny soso-kevi-tsafidy roa monja. Iray amin'ireo vahaolana ireo ny Destroy Windows 10 Spying.
Manimba Windows 10 Ny fampiharana portable fampiasana traikefa dia natao voalohany indrindra hamafana ireo parametres telemetry, izay tompon'andraikitra, ankoatra ny zavatra hafa, amin'ny famenoana tatitra alefa amin'ny Microsoft ary ahitana ny fampahalalana momba ny fampiasana ny mpampiasa, ary koa ny hetsika ataony. Ankoatra ny asany fototra - fanesorana ny fitsikilovana nataon'ny OS mpandrindra, Destroy Windows 10 Spying dia mitondra lisitra iray feno safidy fanampiny.
Famafàna fanesorana otrikaretina
Amin'ny fanombohana programa iray izay tsy mitaky ny fametrahana, dia afaka manomboka ny fandefasana ny "Destroy Windows 10 Spying" amin'ny aterineto voalohany indrindra ny mpampiasa amin'ny alalan'ny bokotra lehibe izay manomboka ny dingan-dingana automatique amin'ny fanadiovana ny rafitra amin'ny spyware miaraka amin'ny fametrahana ny default.
Fiovana, fomba fiasa matihanina
Afaka mampiasa ny tabilao ireo mpampiasa za-draharaha marobe "Settings" ary dia mamaritra ny fepetra manokana izay handringana ny Windows 10 Spying mandritra ny fandidiana azy.
Mba hahafahana manova ny safidy dia ilaina ny manamarina ny boaty "Fomba fanao". Fanomezan-toky sasantsasany avy amin'ireo hetsika diso nataon'ilay mpampiasa izany, satria tsy misy dikany ny asa sasany atao amin'ny fanampian'ny Destroy Windows 10 Saving.
Ireo endri-javatra fanampiny amin'ny fampiharana dia hita ao amin'ny tablette. "Asa vaventy".
Eto ianao dia afaka manatontosa ireo hetsika naseho:
Famafàna ny fangatahana rafitra Windows Windows;
Manitsaka manitsy ny rakitra;
Hanafoana / manavao ny fanavaozana automatique Windows, ary koa "User Account Control";
Esory ireo singa telemanina amin'ny MS Office;
Ny fahafahana manala ny fitsipiky ny firewall efa lany andro;
Ny fidirana amin'ny fampiharana ny rafitra "Famerenana ny rafitra"raha ilaina ny famerenana hamono ny Windows 10 Spying.
Momba ny fandaharana
vakizoro "Momba ny fandaharana"Ankoatra ny fahazoana ny fampahalalana momba ny dika fampiharana sy ny asan'ny mpanoratra amin'ny fanatsarana ny asany amin'ny fananganana vao haingana, afaka manova ny fiteny fampiasa ianao.
Ho an'ireo mpampiasa misalasala raha hampiasa ny fampiharana, ary koa ho an'ny matihanina matihanina mampiasa ny baikon'ny baiko, ny mpanoratra dia nanampy tabilao miaraka amin'ny anarana mitaky ny fifindrana "Vakio aho". Ireo mpampiasa manana traikefa eto dia afaka mianatra momba ireo paikady entina rehefa manomboka ny Console Windows 10 Spying amin'ny konsole, ary ny vaovao vao afaka mamaky momba ireo singa fototra amin'ny fitaovana.
Ny programa dia azo tarafina ary manana habe kely;
Alohan'ny hanombohan'ny fanovana eo amin'ny rafitra, misy teboka fanarenana dia natsangana;
Fomba fanampiny fanampiny.
Ny hetsika sasany amin'ny fangatahana dia miavaka amin'ny tsy fifankahazoana.
Mba hahafahan'ny mpampiasa Windows tsy manahy mikasika ny fiainana manokana rehefa miasa ao anatin'ny tontolo Microsoft OS amin'ny dikan-teny amin'izao fotoana izao, mampiasa Destroy Windows 10 Spying dia vahaolana tena tsara, satria ny programa dia tsy mila fahalalana lalina avy amin'ny endriky ny mpampiasa, ary ny asa rehetra izay ny tanjona dia ny hisorohana ny fanaraha-maso ary ny fandraisana an-tserasera dia atao amin'ny alalan'ny fampiharana automatique.
Download Mameleza Windows 10 Spying for Free
SpyBot - Mitadiava & Rava Programa hanaisotra ny fanaraha-maso amin'ny Windows 10 Windows Privacy Tweaker Windows 10 Privacy Fixer
Manimba Windows 10 Ny Spying dia iray amin'ireo fomba mahomby sy mahomby indrindra hanesorana ny dikan-teny misy ankehitriny momba ny fanaraha-maso Windows ampiasaina.